SPEECH BY BLACK LEADERS Archives - Afrikhepri Fondation
Alatsinainy 18 Oktobra 2021
Fifandraisana SOKAJY RAHARAHAM-BAOVAO BLACK
Kabary nataon'i Haile Selassie tao amin'ny AU tamin'ny 1963 sy 64
Arivo taona lasa izay dia nisy sivilizasiona manankarena teto amin'ity kaontinanta ity. Ireo dia tsy ambany noho ny teo amin'ny kontinanta hafa. Ny afrikanina dia ...
Kabary nataon'i Amilcar Cabral
Holazaiko aminao tsotra izao ary amin'ny fotoana fohy araka izay azo atao momba ny toerantsika, ny toe-javatra misy antsika ary raha maniry ianao, ny safidinay. Famakafakana fohifohy fa isika ...
Kabary nataon'i Martin Luther King "Nofinofy aho"
Lazaiko anao anio, ry namako, na dia miatrika ny fahasahiranana anio sy rahampitso aza dia mbola manonofy aho. Tena nofinofy lalina izy io ...
Afrikhepri dia sehatra ara-kolontsaina iray ampiasain'ny besinimaro hizarana fahalalana. Tsy miasa ho tombontsoan'ny vondron'olona vitsivitsy izany, fa ho an'ny tombontsoan'ny besinimaro. Tsindrio eto ambany amin'ny ...
Kofi ANANN dia nidina teo amin'ny tantara amin'ny maha-humanista lehibe azy
Fanajana ny zon'olombelona, ​​mitovy ny lahy sy vavy, ny ady amin'ny SIDA dia hetsika rehetra notarihan'i Kofi ANANN, Sekretera jeneralin'ny teo aloha ...
Lehiben'ny nentim-paharazana, Pan-afrikanisma & demokrasia
Ny hevitro dia manomboka amin'ny tantara iray niaina tamin'ny tantara iray niaina. Tantara iray mametraka ny fomba fiasa handefasana ny fahefana ho lohan'ny Fondjomekwet. Raha samy ...
Kabary nataon'i Kwame Nkrumah
Nandritra ny taonjato maro, ny eoropeanina dia nanjaka tamin'ny kaontinanta afrikanina. Ilay lehilahy fotsy hoditra dia nanambony tena ho an'ny tenany zo hitondra ary hankatoavin'ny tsy fotsy hoditra. Ny iraka nampanaovina azy, hoy izy, dia ny «manao sivilizasiona» ...
Kabary fitokanana an'i Mandela
Tonga ny fotoana hanasitranana ny ratra. Tonga ny fotoana hikoloana ny elanelana misy eo amintsika. Tonga ny fotoana hananganana. Tonga tamin'ny farany izahay ...
Hafatra avy amin'i Marcus Garvey avy any amin'ny Fonjan'i Atlanta, 10 Febroary 1925
Faly aho mampianatra anao fa ny mpanomponao manetry tena dia faly mijaly ho anao sy ny antony mahatonga antsika ho tanteraka amin'ireny toe-javatra ireny izay mahasi-doza ahy ...
Teny nataon'i King Gbehanzin ny 20 Janoary 1894
Ny mpanaradia, ny sakaiza mahatoky farany, fantatrao amin'ny toe-javatra inona, rehefa te-haka haka ny tanin'ireo razambentsika ny Frantsay, dia nanapa-kevitra ny hiady izahay. Nahazo antoka izahay avy eo ...
Tokony handao io hevitra hadalana io isika fa afaka mamoritra ny sandrintsika ary miandry ny hanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho antsika. Raha nanana an'io fikasana io Andriamanitra dia tsy ho ...
Ny lahatenin'i Barack Obama ho an'ny Afrikana
Mijoro eo anoloanao aho toy ny amerikanina mirehareha. Mijoro eo anoloanao tahaka ny zanaky ny afrikana aho. Afrika sy ny mponina ao dia nanampy ny fananganana an'i Amerika sy ...
Teny nataon'i Aimé Césaire
Ny tsy fahampiana dia vokatry ny fihetsika mihetsika sy manafintohina ny saina. Fanombohana sy fiakarana fahamendrehana izy io. Ny fandavana izany, ny tiako holazaina dia ny fandavana ny famoretana. Ady, izany hoe ...